November 30, 2019 adminLoveLeave a Comment on DASTUURKA SOMALILAND PDF
Author: Molkis Kagagar
Maxkamadaha Ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda. Mashruuc-sharci kasta aan ahayn kuwa Maaliyadda.
Haddii Golayaasha Baarlamaanku fadhiyaan marka uu xeerarka degdegga ah soo saarayo Madaxweynuhu, waa inuu ugu gudbiyo muddo toddoba 7 maalmood gudahood ah si ay go’aanno uga gaadhaan. Dawladda waxa xil ka saaran yahay horumarinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka iyo xarumaha daryeelka caafimaadka ee gaarka ah.
Muwaadiniinta iyo shisheeyaha dalka deggeni waxay furan karaan dugsiyo iyo barnaamijyo waxbarasho iyo tababaro oo dastuurkx kasta ah oo waafaqsan xeerka warbarashada. Inay ku tilmaanaadaan xisbi siyaasadeed ama urur gaar ah oo Diineed. Waa inuusan dembi maxkamadi ku xukuntay ka gelin Qaranka Somaliland. Guddida Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay: Ku xad gudub Dastuurka. Samaynta khamriga iyo beerista dasturka ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyuhu geyiga Somaaliland way ka reebban yihiin.
Haddii doorashada Golaha Wakiiladu ku qabsoomi weydo duruufo adag awgeed, Golaha hore ayaa xilka somalilamd haynaya inta ay ka dhamaanayso duruuftaasi, lagana dooranayo Gole cusub. Qof kasta waxa ku waajib ah inuu si hagar la’aan ah u bixiyo cashuurta iyo takaaliifta kale ee xeerku waajibiyey. Guddidu waxay caddayntooda u gudbinayaan xafiiska codsiga caddayntu uga yimid ama Maxamadda Dastuurka wixii iyaga uga muuqda.
Ku-simidda xilka Madaxweynaha marka uu Madaxweynuhu maqan yahay ama uu buko. Xubinnimada Guddida Culimada waxay ku bannaanaan kartaa: Qof kasta waxa ku waajib ah inuu dsatuurka dhawro Dastuurka iyo xeerarka dalka.
Sidaas darteed, dawladdu waxay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayaynta tababarada shaqaalaha. Spmaliland Baarlamaanka ayaa qeexaya hab-socodka mashruuc-sharci, waana in uu muujiyaa mudnaanta gaar ah ee ay Ieeyihiin mashruuc-sharciyada la xidhiidha maaliyadda iyo kuwa Xukuumaddu u aragto degdeg, kuwaas oo mudan in iyaga la hormariyo.
Awoodda iyo karaamada Qaranka. Labada Gole ee Baarlamanka mid waliba mashruuc-sharci uu ansixiyo wuxuu u gudbinayaa Golaha kale; si uu ula eego talooyinna uga siiyo. Labadi kal-fadhi waxaa u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad. Waa inuu xaaskiisu yahay Muslim. Waa inuu xog-ogaal u ahaado xaqaa’iqa dalka ka jira, isaga oo joogay somalilqnd yaraan laba sano ka hor taariikhda doorashada loo cayimay inay qabsoonto.
Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood oo kala ah: Maxamadda Sare waa hay’adda ugu sarraysa Garsoorka; isla markaana waxay tahay Maxamadda Dastuurka. Dhismaha gobollada iyo degmooyinka, xuduudohooda iyo darajooyinkooda xeer baa tilmaamaya. Ansixinta magacaabidda Guddoomiyaha Maxkamadda Sare. Qabashada xilka Madaxweynenimo marka ay jagadu bannaanaato sababahan dartood: Ciqaab iyo dembi waa wixii qodob xeer ama qaanuun jideeyey, waxaana reebban in ciqaabta loo fuliyo hab aan xeerka waafaqsanayn.
Shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu awooddaas iyo karaamadaas sida ku cad Dastuurka u igmaday dawlad ku dhisnaan doonta kuna dhaqmi doonta Dastuurka. Somzliland tirka akhris-qoris la’aanta iyo waxbarashada dadka waaweyni waa waajib ummadeed waana in shacab iyo Dawladba awood Ia isugu geeyo fulinta waajibkaas.
Jideynta cashuuraha, takaaliifta, iyo tallaabooyin kale oo kor Ioogu qaadayo dakhliga. Dhaqan-gelinta Dastuurku waxay ka bilaabmaysaa marka afti loo qaado, natiijada aftiduna soo baxdo, waxana si ku meel gaadha loogu dhaqmi karaa muddo saddex sannadood gudahood ah oo ka bilaabmaysa taariikhdii uu oggolaaday shirweynihii 3aad ee Beelaha Somaliland.
Waxa reebban in qofka lagu xidho meel aanu xeerku bannayn. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo dastuurma gali kara qodobo kale. Hay’adaha Garsoorku waxay ka kooban yihiin maxkamadaha iyo Xeer-ilaalinta.
Masuuliyiinta Qaranka ee Dastuurku waajibiyay in la ansixiyo, si ku-meel gaadh ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan saddex bilood. Tirada Guddida iyo Muddada Xilka.
Xubnaha Guddida Culimada waxa ka reebban. Dawladda ayaa muwaadiniinta u dammaanad qaadaysa xuquuqda somalilane xorriyadaha. Markaa waxaa guddoominaya shirka xubinta ugu da’da weyn; waxaana Goluhu iska dhex dooranayaa Guddoomiyaha iyo laba Guddoomiye ku-xigeen. Guddida Culimadu waxay ka kooban yihiin kow iyo toban 11 xubnood; muddada xilkuna waa shan sanno 5 ; xubintii mutaysatana dib baa loo soo magacaabi karaa.
Waxa Madaxweyne ama Ku-xigeen Madaxweyne loo dooran karaa qofka buuxiya shuruudaha soo socda: Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Doorashada Xubinta Golaha iyo Muddada Xilka. Xaaladaha xeerku tilmaamyo Qaranku wuxuu kafaalo qaadayaa inuu bixiyo difaac lacag la’aan ah; iyada oo saboolkana laga dhaafi karo ajuurada maxkamadda.
Awoodda iyo karaamada Qaranimada waxa leh shacbiga; wuxuuna u adeegsanayaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale. Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada. Inaanu hore ugu dhicin xukun ciqaabeed oo maxkamad horteed kaga caddaaday shantii sanno ee ugu dambaysay.
Under articledastuurka la fulin doona muddo saddex sannadood ka ansixiyo in February iyo dhaqan gelin doonaa si buuxda mar afti sokaliland lagu qabtay.
Nama quseeyo xeerka isgaarsiinta Somaliland oo siyaasaddeeda ka dhaadhicinaysa Britain. Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada. Taasi waxaa xigay dastuurka Somaliland ugu horeeyay, taas oo la ansixiyay ee shirka ee Beelaha Somaliland ee Hargeysa ee February